यस्ता छन्, घरमा भईरहनु पर्ने जरुरी औषधी र उपकरण - Nepal Bahas Nepal Bahas
यस्ता छन्, घरमा भईरहनु पर्ने जरुरी औषधी र उपकरण
प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार १९:३५
♣ डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट ♣
स्वास्थ्यसम्बन्धी सानातिना समस्या तत्काल उत्पन्न भईहाले चिकित्सक कहाँ पुगिहाल्न सम्भव हुँदैन र जरुरी पनि हुँदैन । तर ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? यस्ता साधारण समस्यामा घरेलु ओखतीको निकै ठूलो महत्व हुन्छ र केही औषधीहरू यस्ता छन्, जो आफैंले चलाउन सक्ने ज्ञान राख्नु राम्रो हुन्छ ।
तर के हेक्का राख्नैपर्छ भने यस्ता औषधी चलाउने पूर्णज्ञान आफुसँग वा घरको कोही जान्नेबुझ्नेसँग हुनुपर्छ । साथै औषधी किन्दा त्यसको उत्पादन मिति, नष्ट हुने (म्याद सकिने) मिति र त्यसको सेवन गर्ने तरिकाबारे दिइएको निर्देशन राम्ररी जान्नुपर्छ । यहाँ केही त्यस्ता औषधी र उपचार साधनबारे चर्चा गरिन्छ ।
पुनर्जलीय औषधी :- हामीकहाँ ‘जीवनजल’ आदि नामले चिनिएका पेय औषधी शरीरलाई अतिआवश्यक परिरहने र आकस्मिक रुपमा पिउनुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्यमा त यस्तो अवस्था झन् छिटो आउन सक्छ । यस्ता पुनर्जलीय (पेय) औषधीमा शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्वहरू सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फस्फेट हुन्छन् ।
अत्याधिक गर्मी भएर निकै पसिना गएको अवस्था, पखाला वा धेरै वान्ता भएर जलअल्पता (डिहाइड्रेसन) को अवस्था, खेलकूद र शारीरिक श्रम अत्याधिक भएको अवस्थामा विचार गरेर यस्तो पेय पदार्थ लिनु राम्रो हुन्छ । यसले शरीरको ‘इलेक्ट्रोलाइट’ भन्ने तत्वलाई सन्तुलनमा राख्छ । आफैंसँग केही सामग्री छन् भने घरमै पनि पुनर्जलीय पेय बनाउन सकिन्छ । जस्तै एकलिटर पानीमा चिया चम्चाको आधा खाने सोडा, एक चम्चा नुन, एक ठूलो चम्चा चिनी मिलाएर अलिअलि गर्दै पिउँदा शरीरलाई फाइदा गर्छ । यसका पुरियाहरू बजारमा पनि किन्न पाइन्छ ।
‘पारासिटामोल’ चक्की :- ज्वरो आउँदा वा शरीरको कुनै भागमा दुख्दा प्रायः यही औषधी उपयोग गरिन्छ । साना नानीहरूका लागि झोलको रुपमा र बयस्क, अलि ठूला बच्चा वा किशोरावस्थाका लागि चक्कीका रुपमा यसको सेवन गर्न सकिन्छ ।
पाचक औषधी :- पेट ढुस्स फुल्ने, खाएको नपच्ला जस्तो हुने, वाकवाकी लाग्ने, डकार आउने वा अपानवायू जाने आदि, प्रायः भोजबाट फर्केपछि पेटको असजिलो र अजीर्ण अवस्था उत्पन्न भएमा पाचनक्रियालाई ठीक गर्ने औषधी लिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयुर्वेदिक पाचक चक्की वा पाउडर, ‘पुदिन हरा’ चक्की आदि उपलब्ध छन् । अदुवाको टुक्रा खाँदा पनि यस्तो समस्यालाई ठीक गर्छ ।
एन्टीसेप्टीक क्रिम :- सानातिना घाउ–चोट, काटेको, आगोले पोलेको वा तातो भाँडाले डामेको, किराले टोकेको आदि समस्यामा एन्टीसेप्टिक क्रिम (मलम) उपयोग गर्न सकिन्छ । ‘बोरोलिन’ ‘बोरोप्लस’ ‘बर्नोल’ जस्ता व्यवसायिक नामबाट बेचिने यस्ता सामग्री आकस्मिक समस्यामा उपयोगी हुन्छन् । ‘नियोमाइसिन’, ‘पोलिइक्सिन बी’ सल्फेट, ब्यासिट्रेसिन जिंक आदि तत्व भएका मलमहरू उपयोगी हुनसक्छन् । फ्लुराईड तत्व भएको टुथपेस्टलाई पनि सानोतिनो पोलेको ठाउँमा लगाउँदा निकै आराम हुन्छ ।
एन्टिसेप्टिक औषधी (‘डेटोल’) :- डेटोल त १९३६ मा आविष्कार भएर उत्पादन हुँदैआएको शरीरको बाहिरी भागमा उपयोग गरिने एन्टिसेप्टीक औषधीको एउटा ब्यवसायिक नाम हो । यस्ता एन्टिसेप्टिक औषधीमा क्लोरोजाइलेनल जस्ता सेप्टिक प्रतिरोधी रासायनिक तत्व मूख्यरुपमा हालिएको हुन्छ । घाउ–चोटलाई सफा राख्न र कुनै ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन नदिन, घरका भुई वा भित्तामा पनि आवश्यकताअनुसार यसको उपयोग गर्नसकिन्छ ।
टाँसिने ब्याण्डेज :- यसले ससाना घाउ–चोट, काटेको स्थानलाई ब्याक्टेरियाबाट जोगाउने, फोहोर र थप क्षति हुनबाट जोगाउने र घाउ निको हुने प्रक्रिया सहज बनाउने हुन्छ । धेरैजसो यस्ता ब्यान्डेजमा एन्टिसेप्टिक औषधीय तत्व पनि राखिएको हुन्छ । ‘एडहेसिभ ब्याण्डेज’ ‘स्टिकिङ् प्लास्टर’ आदि भनेपछि बजारमा चिनिने यस्तो प्लास्टर घरमा अतिआवश्यक हुन्छ ।
कपास, क्रेप ब्याण्डेज तथा अन्य :- घाउ–चोट वा खटिरालाई सफा गर्नुपर्दा र घाउमा औषधी लगाएर छोप्नका लागि समेत विशेषरुपले सफा गरेर प्याकिङ् गरिएको कपास घरमा राख्नु उचित हुन्छ । शरीरमा घाउ भयो भने जुनसुकै पुरानो कपडा वा फोहोर कपास लगायो भने घाउ झन् संक्रमित र गम्भीर हुनसक्छ । त्यसैले उपचारका लागि बनाइएको कपास आफैंसँग चाहिन्छ । भरसक कपाससँगै घाउलाई आवश्यक पर्ने ब्यान्डेज पनि राख्नु वेश हुन्छ । शरीरको मर्केको भाग, खासगरी जोर्नीमा आरामको लागि बाँध्ने एकप्रकारको तन्किने सुख्खा ब्याण्डेज, जसलाई ‘क्रेप ब्याण्डेज’ भनिन्छ, घरमै राखिरहे अपर्झट चाहिँदा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
पोटास, क्लोरिन, कार्बोलिक साबुन आदि :- कलेजी रंगको दानादार, चल्तीको भाषामा ‘पोटास’ भनिने रासायनिक वस्तु खानेपानीमा हाल्न वा तरकारी फलफुलका हानिकारक ब्याक्टेरिया मार्न अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । यसको पूर्ण वैज्ञानिक नाम ‘पोटासियम परमानागेनेट’ हो । यो आफैंमा एउटा विषादि हो । शरीरमा पोटासको एउटा कण प¥यो भने पनि त्यसले सो ठाउँमा क्षति गरेको देखाउँछ । यो पानीमा अत्यन्त थोरै हालिन्छ । पानीमा हाल्दा यसले प्याजी रंग देखाउँछ । तर पानी त्यति धेरै रंगिने गरी हाल्नु हुँदैन । ५० देखि ७५ डिग्री फरेनहाइटको तापक्रमको पानीमा मात्र पोटास हाल्नु उचित हुन्छ ।
विशेष खालको छान्ने प्रविधिका साथ पोटास हालिएको पानीलाई छानेपछि मात्र पिउनयोग्य हुन्छ । पोटास हालिएको पानीले लुगा धोयो भने लुगाको रंग बिगार्छ । सफेद लुगा त झनै नराम्रो हुन्छ । बजारबाट किनेर ल्याएका तरकारी, फलफुल आदि वस्तुलाई काटनु वा ताछ्नुअघि पोटास पानीमा डुबाउनु अत्यन्त राम्रो हुन्छ । जस्तै मूला, गाजर जस्ता खाद्यवस्तु कम्तिमा ५ मिनेट पोटास–पानीमा डुबाएर पखालेपछि ताछ्ने काट्ने ग¥यो भने त्यस्ता वस्तु खानका लागि स्वस्थकर र सुरक्षित मानिन्छ ।
क्लोरिन भनिने अर्को रासायनिक वस्तुद्वारा गरिने खानेपानीको शुद्धता प्रक्रिया जसलाई ‘क्लोरिनेशन सिस्टम’ भनिन्छ, का लागि क्लोरिनका चक्की वा तरल रुप जे भए पनि घरमा राखिरहनु उचित हुन्छ । क्लोरिन पनि आफैंमा एक प्रकारको विषादि नै हो ।
हाम्रो देशमा अझै पनि लुतो, खटिरा आदि ब्याक्टेरियाबाट हुने समस्या भइरहन्छन्, जुन विकसित देशमा प्रायः देखिँदैन । फोहोरमा काम गर्नुपर्ने, लूतो, घाउ–खटिरा आदि लागेका मानिसहरूको लागि कार्बोलिक एसिड र क्रेसाइलिक एसिड युक्त विशेष साबुन बनाइएको हुन्छ । यो सँधै उपयोग गर्नुहुँदैन, बिमार निको भएपछि कार्बोलिक साबुन चलाउन बन्द गरिएन भने छालाको चिडचिडाहट (इरिटेसन) हुनसक्छ । उपचारको लागि कार्बोलिक साबुन पनि आफुसँग राख्नुपर्छ ।
फिनेल तथा अन्य कीटनाशक औषधी :- घरको भुईँ, नाली, बिमारी सुतेको कोठा र त्यसको वरिपरि, चर्पी, फोहोर जम्ने र कीरा वा कीटाणु पैदा हुने स्थान, आदि स्वास्थ्यका लागि संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण एरियाको सरसफाइका साथै दुर्गन्ध नाश गर्नको लागि फिनेल राख्नुपर्छ । यो फिनेल ५ लिटर पानीमा १५ मि.लि. मिलाएर घोलेपछि एउटा घरको सबै आवश्यक ठाउँमा छर्किन वा भुई पुछ्न पर्याप्त हुन्छ । विशेषगरी गर्मी याममा हुने संक्रमण वा महामारीको रोकथामका लागि फिनेल छर्नु उचित हुन्छ ।
घरमा झिँगा भन्किने सम्भावना जहाँ पनि हुन्छ । दूधजस्ता खानेकुरा मिलाएर झिँगा मार्ने विषादि राखिदिएमा सबै झिँगा मर्छन् । बिहानको खाना खाइसकेपछि र ससाना नानीहरू स्कूल गइसकेपछि खानेकुरा राखिएका भाँडाकुँडालाई राम्ररी छोपछाप गरेर मात्र यस्तो विषादि चलाउनु पर्छ । मरेका झिँगालाई त्यसै छोड्नु हुँदैन, माटोले पुर्नुपर्छ । तर घरमा लाम्खुट्टे मार्न वा धपाउन अरु कुनै किटनाशक विषादि उपयोग गर्नुभन्दा झ्यालढोकामा जाली हाल्ने, घर अत्यन्त सफा राख्ने र झुल लगाएर सुत्ने गर्नु बेश हुन्छ । रातको समयमा घरभित्र कीटनाशक विषादि चलाउनु हुँदैन, साथै यस्ता विषादि केटाकेटीले नभेट्टाउने ठाउँमा राख्ने र अन्य खानेकुरासँग नराख्ने गर्नुपर्छ ।
पानी–ब्याग :- जाडो याममा चिसोले गर्दा उत्पन्न हुने बिमारीका कारण शरीरलाई तातोपानीले सेक्न रबरको ‘हट वाटर ब्याग’ घरमा तयार अवस्थामा हुनुपर्छ । जाडो याममा दूधे बालक सुतेको आडैमा तातापानी भरिएको यस्तो ब्याग राखिदियो भने त्यसको न्यानोले बच्चालाई झन गाढा निद्रा पर्छ । बुढाबुढीलाई चिसोबाट जोगिन र हातखुट्टा चिसो भएर निद्रा नलागेको अवस्थामा पनि यस्तो ब्यागको आवश्यकता पर्छ ।
थर्मामिटर, रक्तचाप मापक आदि :- ज्वरो नाप्नको लागि थर्मामिटर, घरमा धेरैजना रक्तचापका बिमारी भएमा र रक्तचाप मापक चलाउन जानेमा यस्ता उपकरण पनि घरैमा उपलब्ध हुनु र आफैंले चलाउनसक्नु स्वास्थ्यरक्षाको लागि उत्तम हुन्छ । आजकाल यस्ता मापक वा मिटरहरू डिजिटल प्रविधिमा पाइन्छन् र चलाउन पनि तुलनात्मक सजिला छन् ।
तौलिने यन्त्र :- शरीरको तौल स्वास्थ्यविज्ञानले तोकेको स्तर र मान्यताभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता अनिवार्य जस्तै हुन्छ । किनकि शरीरको तौल अत्यधिक बढ्यो भने पनि विभिन्न रोग शरीरभित्रै पैदा हुन्छन् भने शरीरको तौल सामान्य स्तरभन्दा तल भयो भने पनि धेरै किसिमका बिमारले आक्रमण गर्दछन् । त्यसैले तौलिने यन्त्र (Weight Machine) को बारम्बार आवश्यकता परिरहने हुनाले आफैंसँग राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
पसलमा किन्न पाइने औषधीबाहेक घरेलु औषधीका रुपमा पनि हामी कतिपय खाद्यवस्तुलाई उपचारको प्रयोजनमा लगाउन सक्छौँ । तुलसी, घ्युकुमारी (एलोभेरा), बेसार, अदुवा, लसुन, टिमुर, दालचिनी, मह, जीरा, मेथी, धनिया, ज्वानोदेखि सिप्लीकान, सिस्नु तितेपातीको रस इत्यादि परापूर्व कालदेखि नै चिनेर उपभोगमा पनि बरोबर आइरहेका वस्तुहरूलाई बिमारी अनुरुप उपयोग गर्नसके जीवन स्वस्थ बनाउन सकिन्छ । स्वस्थ रहने जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ उपाय पनि छ । (डा. विष्ट स्वास्थ्य सेवा विभागका पुर्व महानिर्देशक हुन् )
##Dr. mahendra bdr bista
##डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट
महँगीले सीमा नाघ्यो सरकार ! उद्योगी व्यवसायीहरुको सम्पति छानविन गरौं
लोकसेवा आयोगले तोक्यो परीक्षा केन्द्र